जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ तब समानता कसरि सम्भव हुन्छ ? – शिव परियार – PathivaraOnline
Home > विचार > जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ तब समानता कसरि सम्भव हुन्छ ? – शिव परियार
admin May 27, 2020 May 27, 2020 विचार, समाचार 0
जाजरकोट घटनाको राष्ट्रव्यापी बिरोध भैरहेको छ । नेपालका अधिकांश जस्ता कलाकर्मीले यस घटनाको चर्को बिरोध गर्दै दोषीलाई कडा कारबाहीको माग गरिरहेका छन् । यस्तैमा गायक शिव परिपारले यस विषयमा आफ्नो अभिव्यत्ति दिएका छन् । शिवले दलित शब्द नै खारेजीको माग गरेका छन् ।
शिव परियारले आफ्नो फेसबुकमा लेखेको स्टाटस पढ्नुस् : जब सम्बोधन शब्द नै निच शब्द छ, तब समानता कसरी सम्भव हुन्छ ?
जातिय उत्पिडनमा परेका बर्गहरुको सम्बोधनमा प्रयोग गरिने “दलित” शब्द खारेज गरियोस । यो शब्दको उच्चारण र प्रयोगले पनि मान्छे मान्छे बिचमा बिभेद बढाउन मद्दत गरेको महशुस भएको छ ।
दलित सम्बोधनको साटो समग्र जातिय उत्पीडनमा परेका नेपालीहरुको सम्बन्धमा सम्मानजनक शब्दको ब्यवस्था गरियोस । उत्पिडनमा परेका वर्गहरुको शैक्षिक र सामाजिक अवस्था सुधारोन्मुख परिवर्तनका लागि नेपाल सरकारले उल्लेखनिय भुमिका खेलोस् ।
नेपाल सरकार र सम्पूर्ण उत्पीडित वर्गको समानताको लागि आवाज उठाउने निकाय, संस्था, अभियानकर्ता र व्यक्तिहरुमा म लगायत सबैको सादर अनुरोध।
बेखबर रहेका तपस्वी रामबहादुर बम्जनको एक्कासी आयो यस्तो खबर
EXCLUSIVE: गुम्बामा धर्मगुरुको अनै’तिक ह’र्कत, युवतीहरुलाई छानी-छानी बला’त्का’र (भिडियो)